Sidee loo hagaajiyaa boggeyga SEO ee caalamiga ah?
Maalmahan, adduunka casriga ah ee casriga ee Webka ayaa noqda mid caalami ah. Laga soo bilaabo bilowga Midowga Yurub ee ku xiran helitaanka Internetka in ka badan 80%, qaar ka mid ah gobolada kale ee aadka u sareeya oo leh qiyaastii 90% dhulka. Tirada dhabta ah waxay noqon kartaa xitaa ku qanacsan Shiinaha iyada oo qiyaastii 731 milyan oo isticmaala isticmaala, inkasta, ay ka dhigan tahay kalabar qiyaasta wadarta guud ee dadweynaha. Waa hagaag, internetku wuxuu bixiyaa fursado kala duwan fursadaha kala duwan ee mulkiilayaasha bogguba waxay jecel yihiin in laga hadlo xudduudaha, iyada oo aan jirin caqabado dhaqameed. Hase yeeshee, si kastaba ha ahaatee, ganacsade kasta oo internetka ah waa in uu yeeshaa faham balaadhan oo ah macaamiisha kala duwan waxay u baahan yihiin inay siiyaan alaabooyinka ama adeegyada ugu baahida badan.
Isla mar ahaantaana, samaynta maaddooyin ku habboon ayaa sidoo kale noqonaya arrin ay tahay in la tixgeliyo. Inta badan, waxaad u maleyn kartaa in SEO caalamiga ah micnaheedu yahay uun inuu helo content midaysan oo imanaya maalin kasta Ingiriisi. Laakiin xaaladdu maaha mid fudud sida ay u muuqato marka hore. Waxyaabaha ay tahay in la adeegsado mabaadi'da asaasiga ah ee SEO-yada caalamiga ah micnaheedu waa in maskaxda lagu hayo iyo samaynta habboon ee farsamooyinka kala duwan ee ku-meel-gaadhka iyo deegaan-soo-saarka, oo lagu taageeray dhinacyo farsamo oo badan oo ah isha-raadinta. Waxaa intaa dheer, laga soo xigtay istaraatiijiyada suuq-geynta suuq-geynta caalamiga ah, in la qabto SEO-ga caalamiga ah ee miisaanka buuxa ee buuxin kara shaqada dhabta ah oo waqti-qaadatay. Hoos waxaa ku qoran inaan fiiro gaar ah u leeyahay qorshayaasha dhexe ee aad adigu awood u siisid SEO-ga caalamiga ah ee waxtarka badan, iyo in la xoojiyo kartida ganacsiga ee ku dhowaad mashruuc kasta oo online ah.
Soo saarista isweydaarsiga dalabaadka gobol kasta
Ka fikirida adduunka, waxaad ogaan doontaa in xitaa Google lafteeda ay leedahay noocyo kala duwan oo mawduucyo ah iyo qaabab kala duwan oo lagu soo bandhigo bogagga natiijada natiijooyinka raadinta (SERPs) ee shakhsiyaadka shakhsi. Waxaan u jeedaa in su'aal muhiim ah oo shakhsiyeed laga yaabo inay keensato jawaab ka duwan waddanka. Xaqiiqna ah, Google waxay leedahay SERPs-ka loogu talagalay danaha gobolka waxayna ku dadaaleysaa inay raacdo isbedelka maxalliga ah ee loogu talagalay waaya-aragnimada dadka isticmaala ee waddan kasta. Marka la eego ereyada muhiimka ah iyo qiimaha taraafikada, xaddidaadaha qaarkood oo soo baxaya luuqado kala duwan iyo erayada deegaanka. Qeyb weyn oo ka mid ah ereyada muhiimka ah ayaa badanaaba ku fashilmaan inay helaan tarjumaad ku filan. Taas waa in la tixgeliyaa marka hore iyo ugu horreyn, dabcan waxay tixgelinayaan dadka maxalliga ah, danaha dhaqameed, iyo waxyaabo kale oo badan oo aan weli si buuxda u cadayn xitaa kuwa ugu khibrad badan. Taas macnaheedu waa wadamo kala duwan ayaa badanaa leh wax badan oo ka mid ah filashooyinka lama huraanka ah, xitaa gudaha warshadaha isku midka ah. Ma aha in lagu xuso magac caalami ah, gaar ahaan marka la tixraacayo waxa dhabta ah ee dadku rabaan inay arkaan ka hor inta aysan imaanin go'aanka iibka.
Samee istaraatiijiyadaada SEO ee caalamiga ah
Ugu horreyntii, samaynta istaraatiijiyad caalami ah oo caalami ah, aynu u qaadno sidii loo siin lahaa - si fiican loogu daro luuqad gaar ah, tusaale ahaan Shiinaha, macnaheedu maaha Natiijada quruxda badani waxay ka socotaa adduunka oo dhan. Natiijo ahaan, waxaa lagaa doonayaa inaad bilawdo wanaajinta SEO-ga ee maxalliga ah, bilawga sameynta content si quman oo loogu talagalay dhageystayaasha aad dooratay ee wadan hal wadan. Sidaa oo kale, waxaad fahmi doontaa isbeddellada ugu muhiimsan gobolka ee taraafikada, iyo sidoo kale waxyaabaha gaarka ah ee loogu talagalay keywords keywords. Sidoo kale, waa inaad codsataa qaybo farsamo ee SEO ah heer qaran oo heer caalami ah. Waxaan ula jeedaa inaad u baahan tahay inaad ku soo gashid boggaga internetka adigoo hreflang tags.
Inta badan, hreflang tag waxay u taagan tahay qayb ka mid ah calaamadaha Google ee loo isticmaalo si loo ogaado waddanka la beegsanayo, iyo halkan luqad loogu talagalay boggaaga internetka. Waxay kaa caawinaysaa inaad hubiso in maaddada saxda ah lagu soo bandhigo gobolka saxda ah ee saxda ah. Tusaale ahaan, xitaa luuqada Isbaanishka, waxaa jiri lahaa waxyaabo muhiim ah oo muhiim u ah erayada marka aad u habeysid content-kaaga Spain laftiisa, iyo tusaale ahaan u muujinta isticmaalaha Argentine. Isticmaalidda tagsiyada hreflang waxay awood u siin doonaan inay ku siiyaan waayo-aragnimo aad u fiican adigoo isticmaalaya qoraallo dheeraad ah.
Isla mar ahaantaana, isticmaalka calaamadaha hreflang waxay yareynayaan halista suurtagalka ah ee ka kooban mawduucyo kala duwan, oo sheegaya Google in mawduucda gaarka ah loo qoray si loogu dhagaysto dhagaystayaasha maxalliga ah ee ujeedada. Inaad ku bilowdid inaad calaamadiso mawduucaaga, waxaan kugula talinaynaa inaad isticmaasho qaabka ISO 639-1 ee luuqad kasta, marka la eego dhamaan jihooyinkaaga kuugu imaanaya in ka badan 10,000 oo URL, ama inaad u qaybiso qaybo dhowr ah iyo sidoo kale. Hoos waxaa ku yaal 3 qorshe oo muhiim ah si loo hubiyo inaad ku qeexdid sharaxaadahaaga hreflang si sax ah:
Gaar HTTP Header oo lagu taageeray astaanta hreflang si aad u hubiso in ay la socoto bogga internetka
Istaraatijiyadaada ku meel gaar ah oo midaysan
Aan u qaadno si aan u bixinno - samaynta maxaliga ah ee loogu talagalay SEO-ga caalamiga ah micnaheedu ma aha turjumaad fudud oo fudud oo loogu talagalay bogagga internetka ee khaaska ah ee gobolka. Waa inaynu wajahnaa - samaynta deegaan lagu kalsoonaan karo macnaheedu waa abuurista qoraallo faahfaahsan kuwaas oo noqon lahaa kuwo ku habboon danaha degaanka iyo raadinta raadinta. Waxaan u maleynayaa inaad u baahan tahay inaad maarayso cilmi-baaris gaar ah oo loogu talagalay waddan kasta oo aad wax ka qabato. E. g. , haddii aad doonayso inaad ku daboosho goobo badan oo aad ganacsigaaga ku leedahay, waxaan kugula talin lahaa in aad haysato bogag kala duwan oo soo socda, dabcan, waxyaabo kala duwan oo loogu talagalay iyaga si ay u helaan aragti wacan ee gudaha, iyo waliba natiijooyinka baaritaanka guud ee raadinta boggaga.
Marnaba ha ka fekerin inaad bixiso waqtigaada iyo dadaalkaaga inaad isku keento nidaamyada caalamiga ah, degaankaaga, iyo naqshadaha mobile-ka ee istaraatiijiga caalamiga ah ee caalamiga ah. Waxaan soo jeedinayaa sameynta liis muhiim ah, oo laga bilaabo waddamada kuwaas oo u badan inay u fidiyaan macaamiisha ugu badan oo aad raadineysid gudaha suuqa. Tusaale ahaan, haddii laguu bar-bardhigo dadka isticmaala Shiinaha, waxaad ka fekereysaa in ka badan 95% dadka isticmaala Internetka ee internetka ay ku dhex-galaan internetka iyada oo loo marayo qalabka la qaadi karo. Taasi waa sababta loogu magac daray rabitaanka tartanka inay ahaato mid ay udub dhexaad u tahay wax ka qabashada moobiilka.
Ugu dambeyntii, marnaba ilaawin inaad cabirto natiijooyinka istaraatijiyadaha caalamiga ah ee SEO adoo isticmaalaya cabbir taxaddar leh oo ah waxqabadkaaga hadda. Samee laba-jeeg oo ku saabsan dhammaan jaangooyooyinkaaga ku yaala gobol kasta oo la beegsanayo sida ugu macquulsan. Had iyo jeer xasuuso inaad raadisid qiimeyntaada, sidoo kale si aad u hubiso boggagaaga internetka in ay si sax ah u daneeyaan waddan kasta ama gobol kasta. Ka dib oo dhan, ha dareemin inaad xishood u tahay inaad isticmaasho awood aad u saraysa ee PPC si aad u balaadhiso suuqyada cusub. Isticmaalka saxda ah ee PPC ee istiraatiijiga caalamiga ah ee SEO wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho faham wanaagsan ee dhaqanka maxalliga ah, isbedelka is-beddelka, iyo sidoo kale helitaanka xayiraad ka fiican waddanka cusub Source .